Waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay turjumaanka ay maxkamadda-ay ballamisay Haddii aan lagu siinin, wac1.888.317.3177.
Lagula dhaqmo dadka cadaalad iyo eex la’aantu waa seeska nidaamka garsoorka. Maxkamadda Sare ee Ohio waxaa ka go’anay inay hubsato sinaanta cadaaladda dhamman dadka hor yimaadka maxkamadda oo ay ka mid ka yihiin shaqsiyaadka dhegaha la’a, ku adag yahay maqalka, ama aqoonta xadidan ee Ingiriisiga leh.
Maxkamadda Sare waxay aqoonsantahay bixinta waajibaadka adeega luuqada caawinta ee lagu difaacayo adeegyada xuquuqada shaqsiga. Sababto ah qodob walba oo ah ciwaanka nidmaaka sharciga wuxuu leeyahay cawaaqib adag, maxkamaddaha waa inay sameyaan dadaalka si loo hubsado adeegyada luuqada in la siiyo dadka dhegaha la’a, ku adag yahay maqalka iyo shaqsiyaadka ay xadidan tahay aqoonta Ingiriisigu inta lagu jiro dacwada, maxkamadda, tallaboooyinka iyo shaqooyinka maxkamadda.
Si loo caawiyo maxkamaddaha gobolka ee Ohio si loo buuxiyo waajibaaka ku saxiixan Qodobka VI ee Xeerka Xuquuqaha Ray’idka, Qodobka II xeerka ee Dadka Mareykanka ah ee Leh Xeerka Naafaddal, iyo shuruudaha sharciga kale iyo Sharciga Kormeerida 88, Maxkamadda Sare waxay bixisaa ilaha soo socda:
U hogaasamida Helida Luuqada/ Dib u xalinta Cabashada
» Nidaamka Dib u xalinta Cabashada (7 luuqad)
» Jadwalka Dib u xalinta Cabashooyinka
» Foomamka Cabashada (13 luuqad)
» La shaqeynta Turjumaankaaga: Macluumaadka loogu talagalay dadka Dhegaha la’a & Xadidantahay Luuqada Ingiriisigu (7 luuqad)
» Macluumaadka Qareenada iyo Macaamiishooda